Dhalinyarada ku dhaqan Muqdisho oo qaati bilaahi iyo yaa naga qabta ka taagan Raga Soomaaliyeed ee ka yimaada S/Afrika - iftineducation.com
iftineducation.com – Dhalinyarada ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa cabasho aad u xoogan waxa ee ka keeneen Raga Soomaaliyeed ee ka yimaada Dalka K/Afrika kuwaa oo boorsiiyin lacago ah hore usoo qaata taa ee dhalinyaro ku sheegeen mid iyagu lagu dhibaateenayo lacagahaasi.
Dhalinyarada ayaana waxa ee ka cabayaan ah in Raga South Africa ka yimaada ee lacaga wata in ee iibsadaan Jaceylkooda in mudo ah soo dhisayeen joogayna heer gabo gabo ah kuwaa ee ku baa bi’iyaan lacago fara badan ee Waalidiinta siiyaan Dhalinyarada South Africa ka timaada.
Raga Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika kayimaada ayaa sidoo kale gabdhaha ee shukaansanayaan ugu sheekeeya in ee yihiin rago ganacsato waa weyn ah oo Dukaamo ku leh Dalka S/Africa aroos Qatar ahna u dhigayaan deetana u kaxeesan doonaan Dalka K/Afrika oo lacagta iskataal gabdahana sidaaba ee kusoo jilcaan deetanaya ujeedkooga ugu soo fududaayo.
Marka intaa loo sheego ayaa gabdhuhu waxa ee bilaabaan in ee iska iloobaan Jaceylkoodii baahida ku dhisnaa durbana isku diyaariyaan aroos ee la galaan Raga South Africa ka yimaada taa oo niyad jab iyo dhibaato xoogan ku noqata Dhalinyaradii gabdhahaasi Jaceyl wadaag ahaayeen.
Raga South Africa ka yimaada qaarkood waxa ee sameeyaan in bil gudaheed guursadaan labo Xaas iyagoo furaya tii hore hadana mid kale sidii hore oo kale u guursadaan taa oo hada ee sameeyaan badi Raga South Africa kayimaada kuwooda lacaga heesta.
Raga qaarkood ayaa mudo bi lama labo bil ah waxa eek u guursadeen gabdho labo ilaa Sadax gaaraya kuwaa ee hadana dib u furan inta ee isla muqdisho joogaan.
Waxaana dhacda markii dib u laabanayaan Raga qaarkood markii dantooda iyo Muraadkooda gabdha ka gaaraan Jaceylkoodii horena Gabdhahaasi bur buriyeen in ee furaan eena kaga tagaan Magaalada Muqdisho iyaga oo uga baxaya waxii balamo ahaa ee la galeen.
Mid kamid ah Dhalinyarada Muqdisho aan la kulmay ayaa ii sheegay in Qaati bilaahi uu ka tagan yahay Raga South Africa ka yimaada mar iyo labana eesan aheyn dhibka ee u geesteen isaga oo aad u murugsanaa markii aan la kulmayay.
‘’Walaalow Waxaa kuu sheego ma aqaan Dhib aan yareyn ayey nagu hayaan Raga lacaga boorsada kuwata ee South Africa ka yimaada aniga markii labaad ayaan marayaa oo gabar aan Jeclaa iga guursadaan oo Jaceylkeygii halkaas aan ku waayo ,maxaan sameynaa ma Xamar ayaana uga tagnaa mise waan iska celinaa Ragan lacagta nagu gumeesanaya ‘’ ayuu yiri Cabdi Salaad oo kamid ah Dhalinyarada Muqdisho ku dhaqan.
Dhalinyarada kunool Dalka South Africa ayaana heesan lamanae ee ku guursadaan ama kula saaxiibaan gudaha South Africa taasina ee tahay mid inta badan adag taa badalkeeda ayeena sameeyaan in Muqdisho ama wadamada kale ee jaarka ah tagaan eena guursadaan hadba tii ifeysa xitaa iyaga oon shukaansan.
Mar aan la kulmay Dhalinyaro badan oo ka timid Dalka South Africa ujeedkoodana ahaa in ee guursadaan qaarkoodna guursaday ayaa waxa ee in badan oo kamid ah ii sheegeen in Muqdisho u yimaadeen in ee guursadaan gabdhaha quruxda badan ee Magaalaad ugu ifaya iyagoona intaa ku daray markii ee laabanayaan in ee iska furaan maadaama ee adagtahay in ee sii wataan ee kula noolaadaan Dalka South Africa.
Hadaba Dhalinyarada Magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqday Raga Soomaaliyeed ee South Africa ka yimaada in ee ka dhaafaan dhibka ee ku hayaan Jaceylkooda ee lacagaha dul dhigaan eena sameestaan Jaceyl ee guursadaan iskana daayaan guurka daneysiga.